शेख कमल कपको उपाधिसंगै किरणको खुसी [फोटो फिचर] | Hamro Khelkud
शेख कमल कपको उपाधिसंगै किरणको खुसी [फोटो फिचर]
चितगोङ (हाम्रो खेलकुद) – नेपाली राष्ट्रिय टोलीका गोलरक्षक किरण कुमार लिम्बु (चेम्जोङ)ले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि माल्दिभ्सको टि.सी. स्पोर्ट्स क्लबले शेख कमल अन्तराष्ट्रिय क्लब कप २०१७को उपाधि जितेको थियो।
शुक्रबार भएको फाइनल खेलमा टि.सी. स्पोर्टसले दक्षिण कोरियाली टोलि पोचीओन सिटिजनलाइ टाइब्रेकरमा ४-२ ले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। निर्धारित ९० मिनेट २-२ गोलको बराबरी र त्यसपछि थप गरिएको ३० मिनेटमा गोल नभएपछि उपाधिको छिनोफानो टाइब्रेकरबाट भएको थियो।
किरणले पोचीओन सिटिजनको दुइ पेनाल्टी प्रहार रोकेका थिए। टाइब्रेकरमा कोरियाली टोलीको पहिलो र चौथो प्रहरलाइ किरणले रोकेका थिए भने टि.सी स्पोर्ट्सको सबै प्रहर गोलमा परिणत भएको थियो। यस जितसंगै टि.सी स्पोर्ट्सले ३०,००० अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ।
जितको खुसीमा रमाउदै गरेका किरणका केहि तस्बिरहरु: